के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ? – Sandesh Press
September 28, 2021 190
विराटनगर एयरपोर्टमा ल्यान्डिङका क्रममा जहाजको गियरमा समस्या आएपछि पुन काठमाडौं फर्काइएको थियो। विमानमा समस्या आएको थाहा पाएपछि यात्रुहरु डराएका थिए । जहाज काठमाडौं फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाइ अलर्ट गरिएको थियो। भिडियोजहाजभित्र त्रास फैलिसकेको थियो। सबैजना रुन थालिसकेका थिए। कतिले भगवान पुकारी रहेका थिए। काठमाडौं फर्किएपछि पनि ८/१० पटक प्रयास गर्नुभयो। जब मैले प्लेनबाट विमानस्थलभित्र नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स देखेँ यसपछि अब बाँच्दिन भन्ने लाग्यो।
Prevअब शरदसँग इन्दिरा क्यामेराको अगाडि निर्धक्क देखिन थालिन
Nextमहिनावरी हुँदा पेट देख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपायबाट पाउनुहोस् छुटकारा
किन भयो गायक राजेशपायल राईमाथि न्यूयोर्कमा त्यस्तो ? अनुमानित तीन कारण !